बैंकबाट ‘होम लोन’ निकाल्न केके गर्ने ? – Aarthik Samachar
बैंकबाट ‘होम लोन’ निकाल्न केके गर्ने ?
अहिले बैंकहरुले नयाँ घर किन्न वा बनाउन ५० वर्षसम्ममा साँवा–ब्याजको किस्ता तिर्न मिल्ने कर्जा योजना ल्याइरहेका छन् । बैंकहरूले आधार दरमा २ देखि ४ प्रतिशत प्रिमियम थपेर आवास कर्जा दिइरहेका छन् । कर्जा तिर्ने आधार राम्रो भए प्रिमियम ब्याजदरमा मोलमोलाई गर्न सकिन्छ भने सेवा शुल्कमा पनि मोलमोलाई गरेर खर्च घटाउन सकिन्छ ।
तिरो तिरेको रसिद (जुन वडा कार्यालयमा पाइन्छ)
घरको नक्शापास भएको कागजात
ब्लू प्रिन्ट र ट्रेस म्याप
तयारी घर किन्न लागेको भए निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र
ऋण लिने र ग्यारेन्टी बसिदिने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी
आम्दानीको प्रमाणपत्र ( आफूले कम गर्ने कम्पनी वा संस्थाबाट लैजाने)
६ महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट
बैंकले तपाईंले राख्न चाहेको धितोको मूल्याङ्कन गर्छन् । प्रचलित बजार मूल्य र सरकारी मूल्याङ्कनको भारित औसतका आधारमा धितो राख्न खोजेको सम्पत्ति अर्थात घर र जग्गाको फेयर मार्केट भ्यालुु निकाल्छ बैंकले । सोपछि त्यसको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन्छन् । अग्रिम ऋण तिर्दा बैंकले ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।